သံမဏိပိုက် / သံမဏိပြွန်၊ သံမဏိတယ်လီစကုပ်၊ ရေတိုင် / မျက်နှာသုတ်ပုဝါထည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ - တရုတ်စက်ရုံ - Yuyao Ninggang Stainless Steel Products Co. , Ltd
အကြောင်း Yuyao Ninggang သံမဏိထုတ်ကုန်များလီမိတက်
သံမဏိပိုက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးသံမဏိတို့ဖြင့်ရောင်းချသောသံမဏိဖိနပ်သည်ဒီဇိုင်းလှပပြီးကြော့ရှင်းသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ ခိုင်ခံ့ပြီးတာရှည်ခံသည်။ အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိနိုင်သည......
Hot Sell သံမဏိတယ်လီစကုပ် Pick Up Tools ကိုအလင်းနှင့်အလွယ်တကူညှိနိူင်ပြီးအရှည်ကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခိုင်ခံ့သောသံလိုက်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေးကျယ်ပြန့်သည်, 1.5-2 ပေါင်€™ထုတ်က......
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အနာကျက်သောအနှိပ်ခံအဝေးခံသံမဏိပိုက်နှင့်သံမဏိပိုက်နှင့်ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတွင်ခြေသည်းငါးခုပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုတိုးချဲ့ပြီးနောက်၊ ခြေသည်းအ......
Hot Sell သံမဏိတယ်လီစကစ် Flyswatter ကြီးမားသောatterရိယာ Swatter ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအရောင်များအတွက်ပစ္စည်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောဒီဇိုင်း၊ ပျံသန်းနိုင်သောယင်ကောင်များနှင့်ခြင်မ......
ကော်ဖီသို့မဟုတ်အခြားသောက်စရာများအတွက်ဇွန်းပါသော FDA သံမဏိသောက်သုံးသည့် Straw များကိုအရည်အသွေးမြင့်ပြန်သုံးနိုင်သော SS304၊ လူသားဒီဇိုင်း၊ ကောက်ရိုးများနှင့်လှုပ်နေသောဇွန်း ၂ ကိုပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ရိုးရှ......
သံမဏိသောက်သုံးသည့် Strawicone Silicon Silicon Tips များနှင့်ရာထူးလက်စွပ်တို့ကိုအစားအစာအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်ပြန်လည်သုံးနိုင်သော SS304 နှင့် silicone တို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နှုတ်ခမ်းနှင့်အခြားအရေပြားမျ......
Soft Silicone ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသောက်သုံးသည့် Straw များကိုအရည်အသွေးမြင့်ပြန်လည်သုံးနိုင်သော SS304 နှင့် silicone၊ သံမဏိသို့မဟုတ်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအများသုံးသတ္တုကောက်ရိုးများနှင့် silico......
Metal Ss304 Straws များနှင့်အတူပါးစပ်အစာအာဟာရဆိုင်ရာဆီလီကွန်အချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းသည်အစားအစာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်သုံးနိုင်သော SS304 နှင့် silicone တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင......
သံမဏိပြွန်အောင် technique ကို